David Beckham oo ka fiirsanaya inuu tababare u noqdo xulka qaranka Ingiriiska – Gool FM
David Beckham oo ka fiirsanaya inuu tababare u noqdo xulka qaranka Ingiriiska
(England) 04 Sebt 2019. Xiddigii hore ee khadka dhexe kooxda Manchester United ee David Beckham ayaa soo jeediyey inuu ka fiirsado inuu qabto shaqada Tababarennimo ee xulka Ingiriiska haddii loo soo bandhigo.
44-sano jirkaan, kaasoo milkiile u ah kooxaha Salford City iyo Inter Miami ayaa si joogto ah kabtan ugu ahaa xulka qaranka saddexda Libaax intii lagu guda jiray 13-kii sanadood oo uu ku sugnaa xulkiisa, waxaana uu u dhaliyey 17 gool 115 kulan oo uu u saftay.
Isagoo la hadlayey Wargeyska GQ Magazine xiddigii hore ee kooxda LA Galaxy ayaa yiri: “Haddii uu qof i weydiiyo oo uu i yiraahdo haddii shaqada Ingiriiska laguu soo bandhigo ma qaadanaysaa?, waxaan ula jeedaa dabcan waan ka soo fikirayaa middaas, maxaa yeelay waxaan ahay nin Ingiriiska aad u jecel, waana xiiseeyaa xulkeenna qaranka, laakiin ma ku haboonaan lahaa shaqadaas? Yaa garanaya?”.
“Waa shaqo riyo ah, laakiin Gareth waxa uu haatan hayaa shaqo heer sare ah, waxa uu fir-fircoonidii iyo xiisiloonidii ku soo celiyay ciyaarta, taageerayaasha iyo aniga qudheyda waana ku raaxeysanaynaa”
Xulka qaranka England ayaa isku diyaarinaya kulamadooda isreeb-reebka Euro 2020 oo ay la leeyihiin xulalka Bulgaria iyo Kosovo.
Kooxda Manchester City oo bayaan ka soo haartay qalliinkii lagu sameeyey daafaceeda Aymeric Laporte
RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday liiska xiddigaha kaga qeyb galaya tartanka Champions League xilli ciyaareedkan 2019-2020